MW Farmaajo ayaa amray in calanka Somalia hoos loo dhigo muddo seddax cisho si… – Hagaag.com
MW Farmaajo ayaa amray in calanka Somalia hoos loo dhigo muddo seddax cisho si…
Posted on 11 Maarso 2021 by Admin in National // 0 Comments
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyadeeyay geerida ku timid Madaxweynihii hore ee dalka, Cali Mahdi Maxamed oo xalay ku geeriyooday isbitaal ku yaala Magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Madaxweynaha ayaa yiri “Innaa lillaahi wa innaa ileyhi Raajicuun. Waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa qoyskii, qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Alle ha u naxariistee Madaxweynihii hore ee dalka, Marxuum Cali Mahdi Maxamed oo ku geeriyooday dalka Kenya.”
“Waa geeri xanuun badan oo si weyn ay u wada dareemeen shacabka iyo dowladda Soomaaliya.”
“Alle ha u naxariisto Madaxweyne Cali Mahdi, waxa uu door weyn ka soo qaatay dowladnimada dalka. Waxaan ku xasuusanaynaa sida ay uga go’nayd in dib loo soo celiyo dowladnimada Soomaaliyeed oo uu dadaal muuqda ku bixiyey.”
“Waxaan muddo saddex cisho ah hoos u dhigaynaa Calanka Jamhuuriyadda si aan u muujinno murugada geeridan ku timid Madaxweynihii hore ee dalka, iyadoo la magacaabayo guddi ka shaqeeya Aas-Qaran oo loo sameeyo Marxuumka, si loo maamuuso dadaalkii uu ku bixiyey dalka iyo dadka Soomaaliyeed.”
“Alle waxaan u weydiinayaa Marxuumka in uu hoygiisa ka yeelo Jannatul Fardowsa, samir iyo iimaanna uu ka siiyo qoyskiisa iyo guud ahaan Dowladda Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday.”